Manchester City oo hal kulan oo ay guuleysato ka xiga horyaalka Premier League Ingriiska… – Hagaag.com
Manchester City oo hal kulan oo ay guuleysato ka xiga horyaalka Premier League Ingriiska…
Posted on 7 Maajo 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Manchester City ayaa hal talaabo oo keliya u jirta inay sii haysato koobka horyaalka Premier League Ingriiska ka dib markii ay ku garaacday Leicester City gool cajiib ahaa oo uu dhaliyay kabtan Vincent Kompany.
Kulanku wuxuu ku sii socday gool la’aan muddo dheer. ilaa markii dambe ay heleen fursad ay gool ku dhalliyeen, taasi oo ku sii heyneysa rajada ah in mar labaad ku guuleysan karaan koobka iyadoo hal ciyaar keliya ka hartay horyaalka.
Manchester City ayaa hal dhibic ku hogaamineysa Liverpool. Waxaa jira hal kulan oo keliya, iyadoo ardeyda Pep Guardiola ay wajahi doonaan Brighton, halka Liverpool ay la kulmi doonto Wolves. Kulamadaasi oo mar keliya la wada qaban doono ayaa dhici doona 12ka bisha May.
Manchester City ayaa waxay leedahay 95 dhibcood iyo 94 dhibcood oo Liverpool leh.
Guardiola ayaa sheegay: “Waxaa jira ciyaar noo hartay, waxay noqon doontaa mid adag sida kulanka maanta oo kale, waxaan ku ciyaari doonaa banaanka garoonkeena, waxaan aragnay Brighton oo ciyaar wanaagsan la dheeshay Arsenal.”
“Brighton ayaa si ula kac ah u geli doonaan difaac, waxaana kula ciyaari doonaa qaab weerar ah, waxay noqon doontaa kulan adag, laakiin waxaan rajeynayaa qaabka ciyaarteena inay u qalanto inaan noqono kuwo qaada horyaalka”.